Home STARS EUROPEAN Tiemoue Bakayoko ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pitiavana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny milina fiaramanidina midadasika fantatra indrindra amin'ny anarana; 'Bakoko'. Ny tantaranay Tiemoue Bakayoko Childhood plus Untold Ny zava-misy momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahavariana avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Famakafakana ny tantaram-piainany eo anatrehan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy momba ny OFF-Pitch momba azy. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, Lets Begin.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Voalohandohan'ny fiainana
Bakayoko dia teraka tao Paris tamin'ny 17 August 1994 ho an'ireo ray aman-dreny nifindra monina avy any Côte d'Ivoire ka hatrany amin'ny renivohitr'i Frantsa mba hahazoana fiainana tsara kokoa.
Tahaka ny ankamaroan'ny tarika mainty hodiny, dia manana lova frantsay izy io. Raha mbola nitombo izy, dia nipetraka tany amin'ny manodidina an'i Barbès izay manana olona marobe afrikanina. Fiarahamonina iray tany Paris no nahafantarana azy ireo ho an'ny vahoaka mainty hoditra avy amin'ny fifindra-monina Afrikana.
Tiemoue Bakayoko raha mbola zaza ny ray aman-dreniny no manamboatra ny karazana rehetra ambany Asa fotsiny ny mametraka sakafo eo amin'ny latabatra ary mandefa vola ho an'ny fianakaviana lehibe any Côte d'Ivoire. Ny ankamaroan'ny asa an-tsitrapo tamin'izany fotoana izany dia nanenjika ny Afrikana mainty hoditra, na dia ireo olona nahita fianarana aza. Ny fandehanana any am-pianarana dia tsy laharam-pahamehana ho an'ilay zazalahy.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Notarihin'ny World Cup
tahaka Sadio Mane, nahazo fitaomam-panahy tamin'ny baolina kitra izy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany France 1998. Nihiakiaka voalohany izy nahita an'i Senegal, mpifanolobodirindrina aminy (Côte d'Ivoire) nisarika an'i Frantsa teo am-pivoahana ary nijery an'i Frantsa nidina mba hiresaka ny voninahitry ny fifaninanana.
Araka ny nambarany, "Nahazo fitaomam-panahy aho noho ny herim-pon'ireo mpilalao mainty hoditra frantsay tao amin'ny ekipa. Izaho dia olona tia ankizivavy mpiaro sy mpiaro. Ny fitiavan'i Patrick Vieira, Lilian Thuram sy Marcel Desailly no tiako indrindra. Ny fampisehoana nataon'izy ireo dia nahatonga ny fizarana asa ho ahy. Na izany aza, tsy vitako ny tsy hiteny an'i Claude Makalele izay nametraka ny fototr'izay nodiaviko. "
Tahaka ireo ankizy mainty hoditra hafa, ny fanabeazana dia navotsotra ho an'i Bakayoko, nanjary nibitsibitsika tamin'ny baolina kitra avy hatrany taorian'ny fifaninanana baolina kitra mondial 1998. Takatry ny ray aman-dreniny ny antsony ary nanome ny fanohanana rehetra nilainy hanombohana azy. Nosoratan 'izy ireo tamin' ny fianarana baolina kitra (Ny football club de PARIS 15) tamin'ny taona 5.
Bakayoko dia nampiseho ny haavony manintona lehibe indrindra tamin'ny nilalao baolina kitra tamin'ny nivoany voalohany. Izy no lalana teo ambonin'ny ankizilahy tao amin'ny akademia ary tamin'ny fotoana iray dia nalaza ho mpilalao baolina kitra tsara indrindra. Paris 15 dia nitazona azy nandritra ny efa-taona (hatramin'ny taona 9) alohan'ny namelany ny ray aman-dreniny hampiato ny famolavolana azy ho amin'ny akademia tsaratsara kokoa amin'ny anarana -CA Paris Charenton. Izy irery no nilalao nandritra ny herintaona tao Charenton talohan'ny nifindrany tamin'ny hafa Montrogue FC 92. Amin'ity klioba ity dia mihaona olana tsy azo resahina izy, rano iray.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:fahoriana
Amin'ny maha-mpilalao tanora (taona 10) nandritra ny filalaovana an'i Montrogue FC 92, i Bakayoko dia nizaka ny tongotra tapaka tamin'ny alàlany 'fanamby mahatsiravina' avy amin'ny mpanohitra iray. Ny fahasarotan'ny lozam-pifamoivoizana dia nitarika ho amin'ny fotoana maharitra ny asany tanora.
"Indraindray hitako ny asa fanararaotako tanora tonga tampoka". Fotoam-pijaliana mahery vaika ho ahy izany. My Nihamaivana ny fizotran'ny fitsaboana ary nahita aho nandany efa ho 3 taona tsy nilalao baolina kitra " hoy i Bakayoko.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:fandavana
Tamin'ny herintaona 2008 dia nisy ny fanarenana tanteraka ny fifindran'ny voary humerus. Izy dia 13 taona fotsiny toy izay. Niandry herinandro maromaro izy mba hanamafy ny fanarenana tanteraka talohan'ny nisafidianana ny toerana nialany tao amin'ny asany. Indrisy fa tsy nisy ny klioba nangalatra azy noho ny fahaverezan'ny endrika. Nanafoana ny famaizana izy na dia teo aza ny fianarana baolina kitra teo aloha.
Izy io dia ny Akademia baolina kitra tao Rennes izay nanome azy fahafahana hamerina indray ny endriny taorian'ny eritreritra marobe nataon'ny fitantanana. Noheverin'izy ireo fa efa noheverina ho ambony be tao amin'ny kliobany taloha izy. Izany dia nitranga tamin'ny 2009 fony izy vao 14 taona.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Taorian'i Makalele
Taorian'ny dingana roa voalohany tao Monaco, izay nahatonga ny 31 Ligue 1 fampisehoana, nanapa-kevitra ny hanova ny fitondrantenany i Bakayoko mba hanatanterahana ny tanjony. Misaotra ny mpanolotsainy, Claude Makalele izay voatendry ho talen'ny teknikan'ny Monaco tamin'ny Janoary 2016.
Ny anjara asan'i Makalele ho an'i Bakayoko
Araka ny nambaran'i Bakayoko,
"Nanampy ahy be i Makélélé. Rehefa tonga tany Monaco izy dia tsy mpilalao tena tsara, fa nanana fifanakalozan-kevitra maro taminy. Nanome torohevitra be dia be izy ary nampianatra ahy ny fomba hilalao amin'ny lalao baolina kitra kokoa. Navelany hiantso azy noho ny fanampiana fanampiny izy. "
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Quick Maturity
Tsy naharitra ela talohan'ny nahitany fa azony atao ny mikarakara ny tenany bebe kokoa. Teo am-pitomboana, lasa mpiandriam-piandriam-piandohana ho an'i Monaco izy, nanampy ny klioba handresy ny liginy 1 ligy amin'ny vanim-potoanan'ny 2016 / 2017. Tsy vitan'ny hoe nametraka ny tenany ho ampahany manan-danja amin'ny ekipa Monaco izy miaraka amin'ny fampisehoana tsy tapaka, tsy dia naratra loatra izy ary tsy voatsikera intsony ny fampiharana azy nandritra ny fiofanana.
Androany, Bakayoko dia efa matotra. Nametraka ny heriny sy ny fahitana azy any afovoany afovoany izy mba hampiasaina tsara.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Style of Play
Bakayoko dia ampitahaina amin'ny Yaya Touré noho ny kalitao matanjaka be dia be, ny famakiana am-pahombiazana ny lalao, ny fahafahana mamakivaky ny fandehanana ary ny fanatontosana ny fandresena, ny fandalovany sy ny fisavorovoroana. Ny kalitaony manan-danja indrindra dia ny maha-izy azy sy ny atletisma.
Manam-pahaizana manokana amin'ny fiarovana ny faritra midadasika izy. Ny fahaizany manapotehana ny fanafihana sy ny fiarandalamby dia mpilalao roa (Gabi sy Danny Drinkwater) no nahitana bebe kokoa tamin'ny fifaninanana 2016 / 2017.
Ny sambo Bakayoko any Monaco, Leonardo Jardim, indray mandeha: "Mandresy baolina be dia be izy, ary mandanjalanja ny ekipa. Mandany ny baolina tsara izy ary nandresy ny dianany. Izany no anjara asan'i Bakayoko. Mpilalao baolina lavalava tanteraka izy, fanatrehan'ny atleta manan-danja, mahomby amin'ny famerenam-bidy ary mamaritra tanjona mendrika. "
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Ny Black Knight
Amin'ireo toetra rehetra ananany, ny hatezeran'i Bayoko sy ny fahatokisan-tena dia eo ary ny fivarotana azy.
Olona maro no nanontany ny antony anaovany saron-tava? ... Manome anao ny valiny izao.
Bakayoko indray nibontsina ny orony tamin'ny fiofanana nandritra ny lalao voalohany teo amin'ny Lalao Champions League tamin'ny semi-final tamin'ny Juventus.
Tsy navelany hanakana azy tsy hanohitra ny Italiana izany, ary nanapa-kevitra ny hanao saron-tava miaro mainty izy, izay nanolotra azy ny lanjan'ny Superhero Marvel sy ny lohateniny. 'Knight Knight'.
Mbola mahatsapa fanaintainana i Bakayoko eo amin'ny lohalika efa navoakany teo aloha. Araka ny voasoratra tetsy ambony, dia nandresy lahatra lava lava be teo amin'ny tongotra tapaka izy tamin'izy mbola tanora.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Avy amin'ny moko sy ny mainty (Part 2)
Bakayoko dia nahatsikaritra fiovana maro teo amin'ny fiainany Taorian'ilay fihaonany tamin'i Claude Makalele teo aloha Frantsay taloha. Izy dia niova avy tamin'ny fananana ara-dalàna amin'ny fomba fijery manjavozavo.
Amin'izao fotoana izao dia maneho fahatsapana izy, na eo an-tampony sy eny. Ny 1.84m mitazona azy, tsy miloko volom-borona izy rehefa mijery ny endriny, manopy ny volony mavokely indray andro, blonde manaraka.
Rehefa tonga tany Monaco tao amin'ny 2014 izy dia azo jerena avy amin'ny lozam-pianakaviana malaza any ambadiky ny kodiarana mavomavo Porsche Cayenne.
Bakayoko indray nanova ny loko rehetra tamin'ny fiarany tamin'ny moko ka hatramin'ny mainty. Fanampin'izany, nanomboka nanao ady totohondry izy ary nanova ny sakafony ary nanatsara ny heriny.
Saingy rehefa niova ny fihetsiky ny ranomasina, izay naterak'ilay mpanazatra ny tanora tao Rennes, dia naveriny ny trano ho an'ny trano maotina kokoa ary nahatonga ny Cayenne nitahiry mainty. Hoy izy nanazava: "Nolazain'izy ireo fa tiako ireo zavatra tsara teo amin'ny fiainana, fa tsy nofinofy aho, fa ho avy aho (ho an'i Monaco) ho an'ny karama ambony, izay tsy izany no izy."
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Inona no ao amin'ny nomerao?
Bakayoko dia nizaka ny isan'ny 14 tamin'ny fanamiany tao Monaco. Nifidy azy io izy ho fanomezam-boninahitra ny distrikan'i 14th tany Paris izay nahaterahan'ireo ray aman-drenin'i Ivoriana tamin'ny 17 August 1994, ary hitovy ny isan'i Chelsea.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Deschamps a fan
Ny mpanazatra an'i Frantsa Didier Deschamps dia mpikamabana tanteraka amin'ny fiarahamonina fankasitrahana Bakayoko.
Ny kapitenin'ny mpandresy ny Mondialy 1998 dia mahalala zavatra iray na roa momba ny zavatra entina hananana mpilalao lehibe. Niantso ny Bakayoko izy mba hiaraka amin'ny ekipa Frantsay herinandro taorian'ny fidirana an-tsehatr'izy ireo amin'ny fandefasana ny tanànan'i Manchester avy any Eoropa. Deschamps dia nilaza hoe: "Izy mahery, mampisy fiantraikany, mamaritra tanjona manan-danja, mametraka tanjona ary manana mpanohana lehibe. "
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Ny Tanànany Manetry Tena
Na oviana na oviana, raha tonga any amin'ny Stamford Bridge i Manchester City mba hijery ny lalao Bakayoko, dia ho fantatr'izy ireo fotsiny ny fahasimbana azony atao. Misaotra ny tantara.
Tamin'ny volana Martsa, ny lohan'ny lohateny 13 minitra vetivety dia nanameloka ny tanànan'i Pep Guardiola tamin'ny lozam-pifamoivoizana ligin'ny last-16 izay miala amin'ny tanjona lavitra. Tonga tao amin'ny fanjakana ny fanjakana rehefa nifehy ny kofehy taorian'ny fandresena voalohany tamin'ny 5-3. Ary tamin'ny minitra 19 handeha, dia 6-5 teo anoloana izy ireo, ho an'i Bakayoko ihany ny handefa ny famotsoran-keloka an'i Thomas Lemar mba hanomezana fandresena malaza an'i Monaco. "Faly be ny mitaona amin'ny Champions League. Tsy nanantena an'izany aho, " hoy izy.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Nahoana no nanasonia Azy i Chelsea FC
Ny marina dia holazaina. Nesoriny tamin'ny tetik'i Mourinho izy ireo. Ilay tena manokana dia tia azy satria mahafeno ny feony. (Mahery, mahery ary haingana).
Nahoana no nanao sonia an'i Bakayoko i Chelsea?
Tiemoue Bakayoko dia nifidy an'i Chelsea fa tsy Manchester United satria tia an'i Antonio Conte i Jose Mourinho. Nanodikodina mihitsy aza izy avy amin'ny Special One izay nahatonga azy ho kivy.
Hoy Bakayoko tamin'ny fotoana nahatongavany tany Chelsea: "Mahatalanjona ny miantso ahy Mourinho, na dia efa nampitandremana aza aho talohan'ny fomba hampangitahany ahy amin'ny fomba mandresy lahatra. Nihaino ny heviny momba ny antony tokony handehanako any United aho. Tsy nahalala na inona na inona izy, nihalehibe i Chelsea fa tsy izy. Ny fanoratana anarana ho an'i Chelsea dia zavatra voajanahary ho ahy satria klioba tiako be tamin'ny fahazazako. "
Nahoana i Mourinho no Very Bakayoko?
Angamba antony iray hafa mahatonga fifandonana mahery vaika eo amin'i Jose Mourinho sy Antonio Conte.
Tiemoue Bakayoko tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Tonga tany Chelsea i Jet
Tiemoue Bakayoko nahazo Chelsea mpankafy mientanentana amin'ny famoahana ny sarin'ny tenany amin'ny fitaterana fiaramanidina manokana izay natsangan'ny fiaramanidina nankany Londres avy any Frantsa. Ity jiro ity dia nitondra azy tany Londres mba hiditra amin'ny Blues. Ity fitsidihany ity dia nanao fitsaboana ary nanao sonia fifanarahana tamin'i Chelsea.
Niditra tao anaty fiaramanidina manokana ho an'i Chelsea FC i Bakayoko
Narahiny ilay sary tamin'ny hafatra: "Fiaramanidina, Andao ho ... Hahita herinandro mahafinaritra miaraka amin'i Chelsea FC aho" miaraka amin'ny emojis fiaramanidina.
Febroary 4, 2018
Matteo Guendouzi tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa